चलचित्र 'भारत' मा 'बुढो' सलमान !- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
चलचित्र 'भारत' मा 'बुढो' सलमान !
वैशाख २, २०७६ एजेन्सी
काठमाडौँ — चलचित्र 'भारत' मा सलमान खानलाई बुढो देखाइएको तस्बिर सार्वजनिक गरिएको छ । तस्बिरमा सलमान सेतो कपाल र सेतो दाह्रीमा देखिएका छन् । उनलाई एउटा वृद्धको रूपमा देख्न सकिन्छ ।
रोमान्टिक, एक्सन,थ्रिलर चलचित्रमा बढी देखिने सलमानले आफूलाई बुढो देखाइएको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै आफ्ना 'फ्यान' हरुलाई सरप्राइज दिएका छन्। चलचित्रकोतस्बिर ट्विट गर्दै सलमानले आफ्नो 'रंगिन जिन्दगी' को कुरा समेत उल्लेख गरेका छन्।
चलचित्रमा सलमानको बाल्यकालदेखि ६० को दशकसम्मको यात्रारहेकोबताइएको छ। यो चलचित्र सलमानका लागि एउटा ऐतिहासिक हुने बताइएको छ।
यो चलचित्रको ट्रेलेर अप्रिल २४ तारिखका दिन रिलिज गरिने चलचित्र निर्माण युनिटले जनाएको छ। सलमानका अलवा 'भारत'मा कट्रिना कैप, दिशा पटानी, तबू, ज्याकी श्राफ र सुनिल ग्रुभरको अभिनय रहेको छ।
अलि अब्बास जफरले निर्देशन गरेको यो चलचित्रक इदको अवसर पारेर जुन ५ तारिखका दिन रिलिज हुँदैछ।
प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ १५:१८
सुथः सिया बिस्का जात्रा
वैशाख २, २०७६ तस्बिर : अंगद ढकाल
काठमाडौँ — बिस्केट जात्राको अवसरमा मध्यपुरथिमिका स्थानीयवासीले सोमबार बिहानैदेखि सिन्दुर खेलेर सुथः सिया जात्रा मनाएका छन् । बिहानैदेखि मध्यपुरथिमिको टोल टोलबाट विभिन्न देवताहरुको मूर्तिलाई खटमा विराजमान गराई खट बोकेर सिन्दुर खेल्दै पूजाआजाका साथ यो जात्रा मनाइएको हो ।
थिमिमा मात्र मनाइने यो जात्रामा एकअर्कामा सिन्दुर दलेर धिमे लगायतका स्थानीय बाजामा नाच्दै हातहातमा चिराग बालेर खट बोकी बालकुमारीमा ३२ खट ल्याएर भव्य रुपमा मनाउने परम्परा छ । यो जात्रा आज बिहानै बालकुमारी र कालिका अर्थात बालाखुको खट बालकुमारी मन्दिरबाट बाहिर निकालेको थियो । हिजोदेखि विष्णुवीर र दक्षिण बाराहीको खट समेत मन्दिरमा राखिएको थियो । विहानै सिद्धिकालीको खट ल्याएर आफ्ना गणहरु सहित बालकुमारी प्रवेश गराएपछि यो जात्रा सुरु भएको थियो ।
जात्रा सुरु भएपछि पमाहरु हातहातमा चिराग अर्थात बत्ति लिएर नाइके प्रधानको अनुमतिमा बालकुमारीको खट उचालेपछि जात्रालाई दिगुटोल स्थित देवता घर परिक्रमा गराइएको थियो । यसैगरि बिष्णुवीर, सिद्धिकाली लगायतका देवदेवीहरुको खट ल्याएर यो जात्रा मनाइएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ १५:०९
रेखाको फिल्ममा रेनशा
‘सानो मन’ लाई प्रिमियरमा प्रशंसा
कोटा ठीक बेठीक !
शताब्दीपछि पुर्खाको देश
हनी सिंहको गीतमा आपत्ति